Inona no atao hoe positivism firaisana ara-nofo | Bezzia
Maria Jose Roldan | 14/09/2021 23:03 | ara-pananahana
Na dia mety ho lainga aza izany, Androany dia mbola lavitra ny lalana tokony haleha amin'ny faritra mampiady hevitra toy ny firaisana. Hatramin'ny taona vitsy lasa izay, ny fifandraisana heterosexual sy monogamous dia nanjakazaka ary ho an'ny olona sasany dia manana tanjona na tanjona fotsiny ny firaisana ara-nofo, izay tsy iza fa ny fananahana ny olombelona. Soa ihany fa nandroso kely ny raharaha ary efa mahazatra kokoa ny mahita mpivady na mpivady miray amin'ny lehilahy miray amin'ny firaisana.
Ny positivisme ara-nofo dia mihombo hatrany eo amin'ny fiarahamonina ary tsara ny manana saina malalaka raha ny tontolon'ny firaisana no resahina. Amin'ity lahatsoratra manaraka ity dia hiresaka aminao amin'ny an-tsipiriany momba ny positivisme momba ny firaisana sy ny fomba tsara indrindra hampiharana azy isika.
1 Inona no atao hoe positivism ara-nofo?
2 Ahoana ny fampiharana ny positivism ara-nofo
Inona no atao hoe positivism ara-nofo?
Izy io dia onja izay misy mpanaraka maro kokoa ary mihevitra ny firaisana ara-nofo ho zavatra voajanahary ao amin'ny olombelona izay tsy maintsy ankafizina tanteraka. Miaro ny fandeferana ny resaka firaisana ara-nofo ary tsy mila mametra ny tenany amin'izany na eo aza ny lalàna mety hapetraky ny ampahany amin'ny fiarahamonina. Tokony hankafy ny firaisana ara-nofo tanteraka ianao ary avelao ny finoana diso izay tsy mitondra na inona na inona.
Mifandraika amin'ireo tanjona kendrena amin'izao fotoana izao dia tokony hasongadina ireto manaraka ireto:
Fahafahana sy fanajana mifandraika amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny lahy sy ny vavy.
Tsy maintsy mandefitra ianao amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo ary aza mitsikera maimaimpoana.
Tsy maintsy ataontsika antoka fa ny fanabeazana mifandraika amin'ny lahy sy ny vavy dia marina sy feno araka izay azo atao, afaka amin'ny fady na fanao mahazatra.
Ahoana ny fampiharana ny positivism ara-nofo
Raha mikasika ny fampiharana an'ity izao ity, tena ilaina ny fananana fihetsika miabo amin'ny firaisana. Tokony hanomboka amin'ny tenanao ianao ary hanafoana ireo fitsarana an-tendrony rehetra mety anananao momba ny firaisana ara-nofo. Manomboka eto dia tsara ny mampihatra an'io positivisme io amin'ny fifandraisana manokana.
Manana an'io fihetsika io amin'ny zavatra rehetra manodidina ny firaisana ara-nofo, Tsy asa mora izany ary mila fotoana fohy hanatanterahana izany. Raha manova ny fihetsikao ianao ary manomboka mahita ny firaisana ara-nofo amin'ny fomba hafa, dia ho tonga amin'ny sehatra rehetra ny fiovana ary ho bebe kokoa ny fahafinaretana amin'ny sehatra ara-nofo.
Raha fintinina, zava-dehibe ny mamela ny fady sy ny stigma momba ny firaisana ary manomboka manana saina misokatra rehefa tonga eo. Ny fananana fisalasalana momba ny firaisana sy ny finoana diso momba azy dia mety hisy fiatraikany ratsy eo amin'ny fifandraisana.
Raha toa kosa ka manana saina malalaka ny olona raha resaka firaisana ara-nofo no tena hahasoa azy indrindra rehefa mifandray amin'ny olona hafa. Zava-dehibe ny fanombohan'ny ampahany amin'ny fiaraha-monina ankehitriny hampiroborobo ny positivism ara-nofo sy mianatra manaja sy mandefitra amin'izay rehetra manodidina ny tontolon'ny firaisana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » ara-pananahana » Inona no atao hoe positivism ara-nofo